ကလေးမွေးဖွားနားပင်းသောသူ၏မိခင် implants ကြားနာတပ်ဆင်ပြီးနောက်1èreအချိန်အတွက် "ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်" ဟုပြောကြား - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » ကျွန်မရဲ့ကျန်းမာရေး implants ကြားနာတပ်ဆင်ပြီးနောက်1èreအချိန်အတွက် "ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်" ကလေးမွေးဖွားနားပင်းသောသူ၏မိခင်လို့ပြောကြား "
ကလေးမွေးဖွားနားပင်းသောသူ၏မိခင် implants ကြားနာတပ်ဆင်ပြီးနောက်1èreအချိန်အတွက် "ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်" ဟုပြောကြား
နားမထောင်သောအံ့သြဖွယ်မဟုတ်ပါ! ကံမကောင်းစွာပဲကျနော်တို့မကြာခဏကြောင့်လူအပေါင်းတို့အားမပေးကြောင်းမေ့လျော့။ အဆိုပါအသေးစား A'deja မြစ်ချောင်းများနည်းပညာအသစ်မှနားမကြားပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စကားမွေးဖွားခဲ့သည်သူမကတနှစ်၏အသက်အရွယ်မှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်သူမ၏န်းကျင်အပေါ်သွားအဘယျသို့နားထောငျနိုငျခဲ့တယျ။
သူ၏မိသားစုသည်အခမ်းအနားထိုက်လှပသောအခိုက်ခဲ့ပေမယ့်မိန်းကလေးများအတွက်ပါကသူမအမေကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ် "ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်" ဟုပြောနားမထောင်ဖို့အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Lorsqu'A'deja သူမမျှော်လင့်ထားရန်အဘယ်အရာကိုမှာအားလုံးမသိ, မိမိ cochlear implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သူမကသူမ၏န်းကျင်အသံကိုနားထောငျဖို့စတင်ခဲ့အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူမအရာအားလုံးကိုစုပ်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်, အလွန်စေ့စေ့နားထောင်နျြရစျ။
© WFTS Tampa ဂလားပင်လယ်အော်
Shelly Ash ကို, ကို Johns Hopkins မှာကလေးအထူးကုဆေးရုံတွင် cochlear implants အတွက်အထူးပြုအဖွဲ့နားအထူးကုနှင့်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရှိပါတယ် ငါကရှင်းပြခဲ့သည် ကလေးတွေကွဲပြားခြားနားကိုတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါ:
ကဆက်သွယ်ရေးကသူတို့သာ mode ကိုကြောင့်တခါတရံသူတို့ကသူတို့ကိုရယ်စရာပုံရသည်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားသူများကိုရယ်မောကွှေးကျွော။
A'deja တစ်စိတ်ကူးတုံ့ပြန်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်အရာရာလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သူမသူ့မျက်စိထ lit အသံသတိထားခဲ့ကြောင်းသူမ၏မျက်နှာအတွက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်ဤကွီးစှာသောအခိုက်ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါကလေး၏မိခင်ဖြစ်သူပက်ထရီရှာကို Shaw ကအံ့ဖွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်:
မကြာမီတွင်သူမ၏ implants ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, အသေးစား A'deja dévelloperတေးဂီတနှင့်ကခုန်များအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုစတင်ခဲ့သည်။ သူမတစ်ဦးသီချင်းနား ထောင်. အခါတိုင်းသူမအပိုင်းအစတို့ကယူသွားရွေ့လျားမကူညီနိုင်ပါ။ မယ်တော်သူစွန့်စားမှုကလေးအတွက်တစ်ဦးစပ်စုနှင့်ရေငတ်ဖြစ်ပါသည်, ဤစရိုက်များဟာ implants ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက် ပို. ပင်သိသိသာသာဖြစ်လာကြပြီဟုဆိုသည်။
cochlear implants ဘာတွေလဲ?
Shelly Ash ကို 30 နှစ်အတွင်းအဘို့ဤနည်းပညာကိုအတူလုပ်ကိုင်ကြောင်းရှင်းပြသည်။ ဒါဟာဤမျှလောက်များစွာသောဆွံ့အနားမကြားကလေးငယ်များဒီယူနစ်မှတဆင့်နားထောငျနိုငျရနျကြောင်းအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
ဒို Zett / Shutterstock.com
70 နှစ်များတွင် cochlear implants ၏အစအဦးကတည်းကလူနာပြောပြီဘာသာစကား၏အမြင်အကြီးအကျယ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ ဤသည် neuroprosthesis ခွဲစိတ်ထဲထညျ့ပွီးနောကျအာရုံအာရုံကြောကိုလှုံ့ဆော်ကြောင်းလျှပ်စစ်အချက်ပြသို့အသံပြောင်းလဲနေသည်။ US မှာအဲဒီ devices များ 58 000 အကြောင်းကိုပါပြီ စုပေါင်း. ကလေးများအပေါ်လူကြီးများနှင့် 38 000 ပေါ်မှာ။
decade3d - ခန္ဓာဗေဒအွန်လိုင်း / Shutterstock.com
သူတို့ကသိပ္ပံနည်းကျအသိုင်းအဝိုင်းကအလွန်စိတ်အားထက်သန်နှင့်အတူလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်သော်လည်း, cochlear implants သူတို့ကိုလူထုစော်ကားမှုအဖြစ်ဤနည်းပညာကိုမြင်သောသူအချို့ဆွံ့အနားမကြားလူတို့တွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာကိုဖန်တီးရန်ဆက်လက်။
"ငါသည်ဤကိုယ်ကိုချစ်။ " ခြေလက်အင်္ဂါမပါဘဲမွေးဖွားတစ်ဦးကမိန်းမသည်သူ၏အသက်နှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်နှင့်အတူပျြောရှငျမဖွစျနိုငျဟုဆိုသည်